Habakọk 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
1 Nke a bụ okwu ikpe Habakọk onye amụma nụrụ mgbe ọ hụrụ ọhụụ: 2 Jehova, ruo ole mgbe ka m ga na-eti mkpu enyemaka, ma ị dịghị anụ ya?+ Ruo ole mgbe ka m ga na-akpọku gị ka i nyere m aka napụta m n’ihe ike, ma ị dịghị azọpụta m?+ 3 Gịnị mere i ji mee ka m na-ahụ ihe ọjọọ, gịnịkwa mere i ji na-ele nsogbu n’anya n’anya? Gịnị mere e ji na-ebukọrọ ihe ndị mmadụ, na-emekwa ihe ike n’ihu m, gịnị mere esemokwu ji na-adị, gịnịkwa mere e ji na-alụ ọgụ?+ 4 N’ihi ya, iwu adịkwaghị irè, a dịghị ekpe ikpe ziri ezi.+ Ọ bụ n’ihi na ndị ajọ omume gbara ndị ezi omume gburugburu, ọ bụ ya mere e ji na-agbagọ ikpe ziri ezi.+ 5 “Leenụ anya ná mba niile, legidenụ anya, kporopụnụ anya lewe ibe unu.+ Nọrọnụ n’ijuanya; n’ihi na ọ dị ihe a ga-eme n’ụbọchị unu, nke unu na-agaghị ekweta, ọ bụrụgodị na a kọọrọ ya unu.+ 6 N’ihi na, lee, m ga-eme ka ndị Kaldia bilie,+ bụ́ mba nwere obi ilu nke na-emekwa ihe ọsọ ọsọ, nke na-aga n’ebe ndị sara mbara n’ụwa iji weghara ebe obibi ndị na-abụghị nke ya.+ 7 Ọ na-emenye ụjọ, na-akpalikwa egwu. Ọ bụ ya na-ekpebiri onwe ya ihe bụ́ ikpe ziri ezi, na-enyekwa onwe ya nsọpụrụ.+ 8 Ịnyịnya ya na-awụ ọsọ karịa agụ owuru, ha na-akpakwa ike karịa anụ ọhịa wolf+ ndị na-apụta n’anyasị. Ịnyịnya agha ya na-azọsi ụkwụ ike n’ala, ọ bụkwa n’ebe dị anya ka ịnyịnya agha ya si abịa. Ha na-efe ọsọ dị ka ugo nke na-efesi ike+ ịga rie ihe. 9 Ha niile na-abịa iji mee ihe ike.+ Mgbe ihu ha bịakọtara ọnụ, ọ na-adị ka ifufe si n’ebe ọwụwa anyanwụ,+ ọ na-ekpokọrọkwa ndị a dọọrọ n’agha dị ka e si ekporo ájá. 10 Ọ na-akwa ndị eze emo, na-achịkwa ndị isi ọchị.+ Ọ na-achị ọbụna ebe ọ bụla e wusiri ike ọchị,+ ọ na-ekpokọkwa ájá wee weghara ya. 11 Mgbe ahụ, ọ ga-aga dị ka ifufe, ọ ga-agaferekwa, ikpe ga-amakwa ya.+ Ọ bụ chi ya nyere ya ike a o nwere.”+ 12 Jehova, ọ́ bụghị kemgbe ogologo oge gara aga ka ị dị?+ Chineke m, Onye Nsọ m, ị dịghị anwụ anwụ.+ Jehova, i mewo ya ka ọ dịrị maka ikpe ikpe ziri ezi; Oké Nkume,+ ọ bụkwa maka ịdọ aka ná ntị+ ka ị tọrọ ntọala ya. 13 Anya gị dị nsọ nke ukwuu nke na ọ dịghị ele ihe ọjọọ; ị pụghịkwa ilegide nsogbu anya.+ Gịnị mere i ji na-ele ndị aghụghọ n’anya n’anya,+ na-agbachikwa nkịtị mgbe onye ajọ omume na-eloda onye na-eme ezi omume karịa ya?+ 14 Gịnịkwa mere i ji eme ka mmadụ dị ka azụ̀ ndị dị n’oké osimiri, dị ka ihe na-akpụ akpụ ndị na-enweghị onye na-achị ha?+ 15 O jiriwo nko azụ̀ dọpụta ha niile;+ ọ na-eji ụgbụ ya adọkpụrụ ha, ọ na-achịkọtakwa ha n’ụgbụ o ji akụ azụ̀.+ Ọ bụ ya mere o ji na-aṅụrị ọṅụ ma na-enwe obi ụtọ.+ 16 Ọ bụ ya mere o ji achụrụ ụgbụ ya àjà ma na-esurere ụgbụ o ji akụ azụ̀ ihe nsure ọkụ; n’ihi na ha na-eme ka òkè ya maa abụba, na-emekwa ka nri ya na-edozi ahụ́.+ 17 Ọ̀ bụ ya mere ọ ga-eji wụpụ ihe ndị dị n’ụgbụ ya, ọ̀ ga na-ala mba dị iche iche n’iyi mgbe niile n’enweghị ọmịiko?+